यौन निजी कुरा हो। यो विषय जहाँ जसका अगाडि पनि खोल्न त मिल्दैन। तर, यसलाई धेरै लुकाउन खोजेर यसले डरलाग्दो रूपको सिर्जना गर्दै छ।
यौन ! यो शब्द मात्र सुनेर कान ठाडो भयो ? नेपाली समाजको निम्ति कत्ति ठूलो शब्द हगि यो ? टेक इट इजी माई फ्रेन्ड। यौन जीवनको विषय हो। जीवनको सुरुवात हो। र, जीवनको विधानमाथि बसेर हेर्दा यो संविधान हो। तर, नेपालमा यो लाज बनेको छ। यो लाज हो वा नेपाली समाजको कथित संस्कार जोगाउने तरिका ? नेपाल भाषा, संस्कृति र जातका हिसाबले साह्रै धनी छ भनिन्छ र यो हो पनि। तर, के यी सब चिज भएको देशमा यौन निकै रहस्यमय विषय बन्नु जरुरी हो ? पक्कै पनि होइन। हामी किन यसलाई बढी लुकाइरहेका छौँ ? तपाईंहरूलाई थाहा छैन, जे लुकाउन खोजिन्छ त्यही बढी हेर्न मन लाग्छ।
बजारका तमाम हर्कत र यहाँको अवस्था देखेर पनि म यो विषयमा कलम चलाउन बाध्य भएँ। नेपाली समाज विकसित हुन जरुरी छ। त्यसमा दुई मत नै छैन। तर, के ठूला बिल्डिङ र चिल्ला सडक मात्र विकासका आधार हुन् ? के विकासको अर्थ र मापदण्ड यतिमै सीमित छ ? पक्कै छैन। दिस इज सो सिल्ली। सबैभन्दा ठूलो विकासको मापन मानसिकताबाट हुन्छ।
अब मानसिकताको कुरा जोड्दा यस सँगसँगै आउँछ यौनको विषय। भन्न सकिन्छ, मानसिकताको चर्चा गर्दा छुटाउन नहुने विषय हो, यौन। नेपाल देश मात्र होइन तर नेपाली समाज पनि निकै साँघुरिएको सोच लिएर हिँड्ने गरेको छ। कक्षामा सेक्स र यसको बारेमा पढाउन शिक्षकशिक्षिका लजाउने। घरमा छोराछोरीलाई यी विषयका बारेमा चाहिँदो जानकारी दिन आमाबा लजाउने। समाजबाट यी कुरा जान्न वा बुझ्न खोज्दा मतिभ्रष्ट र छाडाको ट्याग पाउने। सरकार बलात्कार रोक्न तमाम यौन बुझ्न सकिने साइट रोक्दिने। अनि, कहाँबाट पाउने जानकारी ? उत्तर भए कृपया भन्दिनुस्।
आज यहाँ र भोलि कता–कता बलात्कार हुने हो, यो सबमा पनि यौन विषय अर्थात् सेक्स एजुकेसनलाई गुमनाम बनाएकै कारणले गर्दा हो। तर, के यौनको विषयमा ज्ञान नदिएको कारण यौनका अश्लील हर्कत बन्द हुन्छ वा हुँदै छ भन्ने भ्रममा त छैन नेपाली समाज ? यदि त्यही भ्रम छ भने त्यहाँबाट तुरुन्तै निक्लिन जरुरी छ। राजधानीका विभिन्न ठाउँमा वेश्यालय खुलेका छन्। यहाँ तिनै व्यक्ति काम गर्छन्, जसलाई कहिल्यै थाहा नै भएन कि यौन के हो र यसले के हुन्छ। यदि समयमा नै तिनीहरूले असल यौन शिक्षा पाएका भए यी सब कामधन्दाले ठाउँ पनि पाउँदैन थिए। तर, यति भनिरहँदा म यो भनिरहेको छैन कि वेश्यालय पूर्णतया गलत हो। यो कसैको जीविकोपार्जन पनि हो। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका हरेक मुलुकमा वेश्यालय छन्। यी पनि समाजको आवश्यक्ता पूरा गर्न नैै खोलिएको हुन्। जस्तैः थाइल्यान्डको पटाया पनियसको लागि निकै चर्चित छ। युरोपका तमाम शहरमा वेश्यालय छन्। यसले त्यहाँको पर्यटन पनि बढाएको छ।
तर, नेपालको परिपे्रक्ष्यमा ‘प्रस्टिट्युट’ को भइरहेका छन् त ? ती भइरहेका छन्, जो सेक्सबारे जान्न लुकेर, डराएर र धेरै हदसम्म लजाएर त्यहाँ पुगे र बेकाम यौनकर्मी भए। दिस इज सो ब्याड। यति भन्न सकिन्छ कि यौनको ज्ञान दिन लजाउनुले झन् ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरूले बुझुनु जरुरी छ।
प्रेमको परिभाषा यौन मात्र बन्न थालेको समाजमा हामीले यौन शिक्षा दिन डरायौँ वा लजायौँ भने यस कुराले कत्रो रूप लिन सक्छ भन्ने अनुमान नै छैन। यद्यपि, अब नेपाली समाजले यो कुरालाई कसरी कताबाट लान्छ भन्ने कुरा समाजकै तमाम व्यक्तिमा छ। कुनै चोकको चिया पसलमा चिया खाइरहँदा देखिने दृश्य मेरा निम्ति अब भयानक भविष्य बनेर आएको छ। हेर्दा निकै कलिली केटी मेरै छेउबाट केटासँग अंकमाल गर्दै, मुखमा मास्क लगाएर कुनै गेस्ट हाउस छिर्छे, तब म नेपालका ती तमाम अभिभावकलाई धिक्र्काछु, जसले आफ्नो सन्तानलाई हरेक कुराको ज्ञान दियो र उत्कृष्ट बनायो तर एक ठाउँमा चुक्यो। त्यसपछि उसलाई सायद थाहा नै भएन यो सही हो या गलत भनेर। प्रेमको नाममा फसाइन्छ एक अबोधलाई र यौनलाई सहारा बनाउँदै जिन्दगी बिगारिन्छ। त्यसैले सुनिरहनुपर्छ हामीले गर्भपतनका समाचार स । मलाई लाग्दै छ अब नजानिँदो गरी नै नेपाल र अझ राजधानी यौनकै रंगमञ्च बन्दै छ। अघोषित ‘रेड लाइट एरिया’ भइसके अब ती ठाउँ जहाँ गेस्ट हाउसको घुइँचो छ। अब म भन्दिनँ, कहाँ हो भनेर। अनुमानभया।
तसर्थ, अब नेपाली समाजमा यौनको विषय सधैँ गुमनाम नै हुन खोज्छ भने यसले स्विकार्नुपर्छ विविध घिनलाग्दा समाचार पनि। जबसम्म यौनलाई जीवनको विषय मानेर यौन शिक्षा एकापसमा बाँडिदैन, तबसम्म हरेक पिँढीले यो पाटोमा गैरकानुनी काम गर्न छोड्दैन पनि।
पशुपतिनाथ मन्दिरको त्यो घना जंगलमा मतिभ्रष्ट भएको सुन्छु। साँच्चै हो ? अमेरिकाको न्युयोर्कमा खुलेआम भइरहेको चुम्बन नेपालीलाई स्वीकार्य छैन, तर पशुपति परिसरका अवैध घटना आजसम्म कसरी पाच्य हुन सक्यो ? नेपाली समाज अलिक आदर्शमा ज्यादा हिँड्न खोजेर धेरै कुरामा चुक्दै छ भनेर तपाईंहरूलाई लाग्दैन ? आदर्शका चिज कहिलेकाहीँ बोली र शब्दमा मात्र राम्रा देखिन्छन्। यसको तात्पर्य के हो भने नेपाललाई अविकसित मुलुकको दायरामा राखेर विकासका ढोका पनि बन्द गरिदिएपछि नेपाल विकासका तमाम सम्भावना गफ नै बनाएर चियासँग चुरोटको धुवाँ उडाएझैँ उडाएको राम्रो। अथवा नेपाललाई सही गतिमा लान मानसिकताको विम्बलाई बलियो बनाउन जरुरी छ।
हामीले वर्षाैंदेखि देखिआएको पशुपति परिसरभित्र रहेको वासुकी मन्दिरमा यौनसँग सम्बन्धित अनेकौँ ग्रन्थचित्र भेट्न्छिन्। यसले के बुझाउँछ भने यौन संस्कृतिको पनि एउटा पाटो हो। के अब यौन गलत भन्नेले वासुकी मन्दिरमा पुज्नै छोडदिने ? यौनसँगै आइपुग्छन् यौनसम्बन्धित अनेकौँ चित्र। बलात्कार नेपालको मूल समस्या बनिरहेको बेलामा कयौँ निर्मला शहीद भइसकेका छन्। तर, मलाई लाग्छ कि यो बलात्कार मानसिकताको एउटा कुरूप पक्ष हो। सामाजिक सञ्जालभरि महिलाले लगाउने लुगाको चर्चा हुन्छ। लुगा लगाई नै गतिभ्रष्ट भएको जस्तो भएकाले पुरुषहरूको मतिभ्रष्ट भएको हो भन्ने केही व्यक्तिको धारणा हुने गरेको छ। तर, एउटा प्रश्न छ, निर्मलाजस्तै नेपालमा बलात्कार भएका तमाम चेलीले पनि स्टाइलिस पहिरन लगाएकी थिइन् ? वाहियात कुराको वकालत भएपछि नेपालमा गलत मानसिकताले ठाउँ पाइरहेको छ। अब चिया छोडौँ, कफी खाऔँ। अर्थात्, तानातानले च्यातिन्छ रुमाल। नयाँ सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अब नयाँ सुरुवात कहिलेबाट ?
यौन विषयको आफ्नो परिधि छैन पनि भन्दिनँ। छ। यो निजी कुरा हो। तर, निजी कुरा पनि नसिकाइ अथवा नसिकी त मानिसको जीवनमा आइपुग्दैन त। यो विषय जहाँ जसका अगाडि पनि खोल्न त मिल्दैन। तर, यसलाई धेरै लुकाउन खोजेर यसले डरलाग्दो रूपको सिर्जना गर्दै छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि कुनै पनि वंश बढाउनका लागि यौनिक क्रियाकलाप जरुरी छ। यहाँ के भइरहेको छ भने नेपाल एउटा रंगमञ्च बनिदिएको छ। जसमा हरेक मानिसले आ–आफ्नो अभिनय गरिरहेका छन्। यसले यर्थाथमा एउटा ढोका लगाएको छ र अँध्यारो सिर्जना गरेको छ।
यौन नेपाली समाजमा लुकाछुपीको खेल भएकै कारण यो लुकाछुपीमा सबै रमाउन खोजे। तर, विकसित मुलुकझैँ कहीँ केही नलजाई यौन र यौन शिक्षा खुलेर पढाउन थालियो भने यो समाज आफैँ विकास उन्मुख हुन्छ। साथै, यौनधन्दा गर्न चाहनेले यौनकर्मीको ट्याग भिरेर व्यावसायिक रूपमा काम गर्न थाले यी चिज बिस्तारै सामान्य हुन थाल्नेछन् र नपच्ने मानिस अर्थात् पुराना सोचका मान्छे पचाउन बाध्य हुनेछन्। साथै, सरकारले केही ठाउँ रेड लाइट घोषणा गर्दा मानिस आनन्द प्राप्त गरी बिस्तारै बलात्कारका घटना कम हुन थाल्ने छन्। यौन आफैँमा गलत नभए पनि नेपाली समाजको सोच र समाचारले यसलाई गलत बनाइदियो।